काँग्रेसले परालको त्यान्द्रो समातेर गरेको आन्दोलन दिगो हुँदैन,खिमलाल भट्टाई ,मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभा – Maitri News
काँग्रेसले परालको त्यान्द्रो समातेर गरेको आन्दोलन दिगो हुँदैन,खिमलाल भट्टाई ,मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभा
केही दिन अघि मात्र राष्ट्रियसभाको मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टाई समृद्ध नेपाल खुशी नेपालीको नारा नारामात्र सिमित नराखी जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी वर्तमान सरकार लागेको बताउनुहुन्छ । कसैले हल्ला र आलोचना गरेकै भरमा वर्तमान सरकार नगल्ने उहाँको दाबी छ । भट्टराईसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
तपाईँ केही दिन अघि मात्र राष्ट्रियसभाको मुख्य सचेतक बन्नुभयो । यो जिम्मेवारीसँगै तपाईँको काँधमा झन् ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हाम्रो सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता बजेटलाई पास गर्ने रहेकाले अहिलेसम्म सबै ध्यान त्यसमा नै केन्द्रित भयो । अब देशले नयाँ बजेट पाएसँग केही नयाँ कामको थालनी होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । योसँगै हामीले धेरै कानुनहरु बनाउनु पर्ने छ । हाम्रो ध्यान त्यसमा पनि केन्द्रित भएको छ । कतिपय कानुनहरु अहिले विद्येयकका रुपमा सदनमा प्रस्तुत भएका छन् । ती विषयमा पनि छलफल गर्ने पास गरेर पठाउनेलगायतका काममा हामी लागि रहेका छौँ । समग्रमा भन्ने हो भने अहिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुबै बदलिदोँ राजनीतिक अवस्थालाई सही दिशा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र त्यसलाई सद्नमा ल्याएर पास गराउने जस्ता काममा लागेका छौँ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु प्नि यही काममा सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ ।
तपाईँ अनेरास्ववियुको पूर्व अध्यक्ष समेत भएको व्यक्ति अहिले निकै गरिमामय जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आएको छ । राष्ट्रियसभा भनेको त्यसैपनि गरिमामय ठाउँको हो । यसको महत्वका बारेमा पनि केही बताईदिनु न ?
संविधाननतहः यो राष्ट्रियसभाले सचेतकको भूमिका खेल्छ । प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउँदै गर्दा वा त्यहाँबाट पास गर्दै गर्दा त्यो कतै राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार भएन कि भनेर जाँचपडताल गर्नेका साथै त्यसका बारेमा ‘रि थिङ्क’ गर्ने संस्थाका रुपमा राष्ट्रियसभालाई लिइएको छ । अहिले हामीले त्यही वजनका साथ काम गरिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभाले कहिलेकाँही सामान्य कमजोरी गरेको अवस्थामा हामीले राष्ट्रियसभामा छलफल गर्दा सिङ्गो देशलाई नै केन्द्रमा राखेर गरेका हुन्छौँ र ती सामान्य कमजोरीलाई पनि सच्याएर अघि बढाउने जिम्मेवारी राष्ट्रियसभाको रहेको हुन्छ । हामी त्यही गरिमाका साथ काम गरिरहेका छौँ । संविधानले अपेक्षा गरेको पनि यही हो ।
भनेपछि यो जिम्मेवारीलाई तपाईँ आफैँले पनि महत्वपूर्ण ठान्नु भएको छ ?
निश्चय पनि, देशको प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेताले ममाथि विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ । यसले मलाई निकै निकै गहकिलो जिम्मेवारी थपिएको महशुस भएको छ । यसलाई मैले गहकिलो अविभाराको रुपमा समेत लिएको छु । म एउटा विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति हुँ । पार्टी, संगठनमा निरन्तर काम गरेर नै म यहाँसम्म आएको हुँ । त्यसैले अहिले प्राप्त भएको जिम्मेवारी पनि कुशल ढंगले पूरा गर्न सक्छु भन्ने मलाई आत्माविश्वास रहेको छ ।
त्योसँगै यो सदनलाई मर्यादिन ढंगले अघि बढाउने, राजनीतिक अविभारालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा पनि मेरो भूमिका रहने छ । देश र जनताले गरेको अपेक्षालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा म मैले सकेको ठाउँबाट निरन्तर लागि रहने छु ।
अहिले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । धेरै अपेक्षा गरेको यो पार्टीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने गुनासाहरु पनि यदाकदा सुनिन थालेका छन् । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले हामीले केन्द्रमा पार्टी एकताको प्रक्रियालाई करिब टुंग्याएका छौँ । यद्यपि केन्द्र भन्दा तलका विभिन्न जनवर्गीय संगठन र स्थानीय निकायमा पनि हामीले जसरी दू्रत गतिमा एकता प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हो त्यसमा केही सामान्य ढिलासुस्ती भएकाले पनि केही समस्या भएको छ । त्यहि विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न जोडकोणबाट आलोचना गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । तर, यस्तो अवस्था धेरै समय रहँदैन । हामी जतिसक्दो छिटो यी समस्यालाई हल गरेर जानेछौँ र एकतावद्ध र निकै ठूलो अनि शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने छौँ । त्यतिबेला हामीलाई आलोचना गर्नेहरुले पनि आलोचनाको शीर्षक पाउने छैनन् । हामीले अहिले पनि विधान र नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएका छौँ । अब केही दिन वा हप्ता भित्रै हामीले तलदेखि माथिसम्म पार्टी एक भएको प्रमाण नै देखाउने छौँ । हामी सबै तहमा एक भएपछि हामीले लिएको राजीतिक मिशमा ढुक्कका साथ अघि बढ्ने छौँ । मैले अघि पनि भने । अहिले नयाँ बजेट लागु भएको छ । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका छौँ । हामीले समृद्ध नेपाल खुशी नेपालीको नारा तय गरेका छौँ । हामीले यसलाई नारामा मात्र सिमित राख्न चाहेका छैनौँ । हामी साच्चै नै जनताको मुहारमा खुशी दिन चाहन्छौँ । हामी त्यही अनुरुप अघि बढ्छौँ । हामी समृद्ध नेपाल निर्माण गरेर जनताको अपेक्ष र हाम्रो अठोट पूरा गर्न चाहन्छौँ । हामी त्यसैलाई परिपूर्ति गर्ने गरी हामी लाग्ने छौँ । एकता हुँदै गर्दा जनतामा जुन उत्साह पैदा भएको थियो । त्यस्तै उत्साह हामी फेरि पनि जनतालाई दिन चाहन्छौँ । यो छिट्टै पूरा हुन्छ ।
अहिले नियमावली र विधान बाहिर नआउँदासम्म केही अन्योलता जस्तो देखिए पनि अब ती सबै समाधान भएर जाने छन् ।
नेपालमा अहिले स्थायी सरकार छ । तर, अहिले यो स्थायी सरकारका मन्त्रीबाट जनता त्यति धेरै सन्तुष्ट भएनन् कि भन्ने पनि छ । तपाईँको बुझाईमा के–छ ?
कहिँ कतै बुझाईमा पनि कमजोरी रहेको होला भन्ने मैले ठानेको छु । केही कमजोरी भएका रहेछन् भने ती कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । कमजोरी भएका रहेछन् भने त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । तर, आलोचना गर्नका लागि गरिदिऔँ न त भन्नेहरुका लागि भने हाम्रो यो मिशन रोकिनेवाला छैन । अघि बढ्छ रोकिन्न । यो सरकार स्थायी सरकार हो । यो आठ–दश महिनामा ढल्ने सरकार होइन । त्यसैले यो सरकारका बारेमा कसैले पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । केही कमजोरी रहेछन् भने हामी सच्याएर नै अघि बढ्छौँ ।
जहाँसम्म जुन ढंगले काम गर्नु पर्ने हो सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा छ । अघि पनि मैले भने, हामी समीक्षा गरेर नै अघि बढ्छौँ । पार्टी पनि त्यही ढंगले अघि बढ्छ ।
असोज २ गतेसम्ममा दर्जनौँ कानुन बनाउनु पर्ने जिम्मवारी छ । विभिन्न समितिहरु बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि छ । तर, अहिले प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गोविन्द केसीको अनशनलाई आधार बनाएर हंगामा गरेर छ । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली कांगे्रस यति धेरै कमजोर होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ । अहिले नेपाली कांग्रेस स्वयले पनि आफूलाई निकै कमजोर महशुस गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण हो यो । अहिले केही नपाएर सानो परालको त्यान्द्रो समाएर तर्न सकिन्छ कि भनेर आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेस देखेर हामीलाई टिठ लागेको छ ।
हामीले कांग्रेसको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि समितिमा उनीहरुलाई समावेश नगर्नु पर्ने हो । तर, हामीले त्यसो गरेका छैनौँ । त्यो हामीले निकै उदार हुँदा पनि कांग्रेसलाई मन परेको छैन । यो अचम्मको कुरा हो ।
चिकित्सा विधेयकका सन्दर्भमा पनि कांग्रेसले जुन खालको लफडा गरिरहेको छ त्यो उचित छैन । कांग्रेसले जे कुरामा दबाव दिइरहेको छ त्यो पनि गलत छ । हामी अहिले मुलुकलाई स्थीरता दिने चरणमा छौँ । यस्तो बेलामा यस्ताखाले बखेडा झिक्नु भनेको देशलाई अस्थिरता तिर धकेल्नु हो । यसमा नेपाली कांग्रेसको पनि ध्यान जान सकोस् भन्ने मेरो भनाई छ । यस्ता कमजोर आन्दोलनले कांग्रेसलाई पनि बलियो बनाउँदैन ।